ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိမ်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများ တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
• ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်အသစ်များ၊ နေရာဒေသအလိုက် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ပုံသဏ္ဌာန်၊ ကပ်ရောဂါဗေဒ တွေ့ရှိချက်များ အပါအဝင် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ၊ ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များအား မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် နည်းဗျူဟာများ မွမ်းမံပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် နေ့မအား၊ ညမနားဖြင့် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ COVID-19 လူနာကုသရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများနှင့် COVID-19 မဟုတ်သောအခြား ရောဂါအမျိုမျိုး ကာကွယ်ကုသခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းနေကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင် COVID-19 စည်းကမ်းများကို ပြည်သူများ တိကျစွာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် သင့်တော်သည့် အရေးယူမှုပြုလုပ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါကြောင်း၊
• COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီမှ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဖြေလျော့မှုများ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြေလျော့မှုများပေးပြီးနောက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လူမှုစီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း COVID-19 ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းများကို ဆက်လက် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်မှာ မဖြစ်မနေ အရေးကြီးပါကြောင်း၊
• COVID-19 ရောဂါကာကွယ်စည်းကမ်းများကို ပြည်သူများအကြားလိုက်နာမှု အားကောင်းစေရေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်းကြပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ပြောကြားလို ပါကြောင်း၊
• ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်သူများအကြားတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိနေပြီး ရောဂါလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာ မပြသသူများ ရှိနေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့မှ တစ်ဆင့် ရောဂါ ထပ်ဆင့်ပြန့်ပွား ကူးစက်နိုင်သည် ဆိုသည့်အချက်ကို ပြည်သူတစ်ဦးချင်းသိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရန် "ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားစီမံချက်" မှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• သို့ဖြစ်၍ ယခုအချိန်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရေးအတွက် အသိပညာပေးစည်းရုံးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သင့်တော်သည့် အရေးယူမှုပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါက ရောဂါကူးစက်မှု များဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေမည်ဖြစ်ကာ ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည်ဖြင့် ဘက်စုံကဏ္ဍများ တွင် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် စီးပွားရေးမြို့တော်ရှိရာ နေရာဖြစ်ခြင်း၊ စက်ရုံနှင့် အလုပ်ရုံများ များပြားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိသော သူများ နေထိုင်ကြခြင်း၊ လူဦးရေထူထပ်များပြားခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ပြည်တွင်းလေဆိပ်ရှိခြင်း၊ အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်များစွာရှိခြင်း၊ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် ဝင်ထွက်ပေါက်များစွာ ချိတ်ဆက်မှုရှိကာ ကူးလူးသွားလာမှု များပြားခြင်းစသည့် ကွဲပြားခြားနားပြီး ထူးခြားသည့် အခြေအနေများရှိခြင်းကြောင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် ကျင့်သုံးနေသော နည်းလမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် သင့်တော်သော နည်းလမ်းများဖြင့် COVID-19 စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိစေရေး လုပ်ငန်းများအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊
• ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ယခုကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါဖြစ်စဉ်များတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဋ္ဌာန်းချက် (International Health Regulations 2005) ကို ထုတ်ပြန်ထားကာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိမ်း က ပြောကြားရာတွင် -
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအတွက် အရေးကြီးသော တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ကာ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ မှီတည်နေသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစွာရှိနေပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူများအကြား လူမှုစီးပွား ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရေးတို့ကို ချိန်ဆဆောင်ရွက် နေပါကြောင်း၊
• လက်ရှိတွင် မိမိတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် လူစုလူဝးမဖြစ်ပွားစေရန် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လမ်းဘေးတွင် ထိုင်ခုံများချ၍ အစားအသောက်ရောင်းချခြင်းနှင့် စားသောက်ခြင်းတို့ကို ပိတ်ပင်တားမြစ် လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• COVID-19 လူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများ၊ COVID-19 လူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ နေအိမ်အဆင့်အခြေအနေ၊ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် အသိပညာအဆင့်အခြေအနေ၊ ရောဂါပြင်းထန်မှု အခြေအနေ အပေါ်မူတည်၍ နေအိမ်၊ လူထုအခြေပြု အသွားအလာ ကန့်သတ်ရာနေရာများ၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ/ ကုသရေးဌာနများ စသည်ဖြင့် သင့်လျော်သည့် နေရာတွင် ထားရှိပြုစုကုသနိုင်ရေး ဆွေးနွေးနေပါကြောင်း၊
• ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနက နှီးနွှယ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ "ပြည်သူလူထုအခြေပြု COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အထူးစီမံချက်" အား ကနဦး (pilot) ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ပံ့ပိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားပါကြောင်း၊
• မိမိတို့ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများ လိုက်နာစေရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်း၊ ပြည်သူများ အချင်းချင်း၊ အသင်းအဖွဲ့အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကြီးကြပ်စေခြင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကြီးကြပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပါဝင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး က -
• COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ "ပြည်သူလူထု အခြေပြု COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အထူးစီမံချက်" ကို အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် လိုအပ်သည် ပြင်ဆင်မှုများလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့်
ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာထွန်းမြင့်က -
• "ပြည်သူလူထုအခြေပြု COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အထူးစီမံချက်"အား ပြည်သူအခြေပြုပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက -
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများအား COVID-19 ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်ကာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှု များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်နှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါမောက္ခဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းတို့က -
ယင်းနောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်က -
• ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများက ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအလိုက် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အခြေပြမြေပုံများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိမ်းက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် -
• စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ နေရာဒေသအနေအထားများအလိုက် ရောဂါကူးစက်မှု အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ရေးအတွက် ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အခြေပြ မြေပုံများ ရေးဆွဲရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြုစုထားသော ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အခြေပြု မြေပုံများရှိပါကြောင်း၊
• ယခုလက်ရှိတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ "ပြည်သူလူထုအခြေပြု COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အထူးစီမံချက်" ဆောင်ရွက်ချိန်တွင်လည်း ပုံမှန်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် -
• ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at home) အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်တစ်ခုလုံးအနေအထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရောဂါဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှုပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နေ့အလိုက် ပြောင်းလဲမှု ပုံသဏ္ဌာန်၊ လတ်တလော ဖြစ်ပွားသူ အရေအတွက်နှင့် နေရာအလိုက် အစုလိုက်ဖြစ်ပွားမှု၊ လူအများ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ပမာဏနှင့် အရှိန်အဟုန်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ လမ်းများ၏ တည်နေရာ၊ လူဦးရေထူထပ်မှုစသည့် အချက်များအပေါ်မူတည်၍ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ လမ်း အလိုက်သာ မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at home) အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲတို့ အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် -
. ပြည်သူများ လူမှုစီးပွားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊
. ဈေးဝယ်သူများ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) စနစ်တကျ မတပ်ဆင်ဘဲ ဈေးအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုရန်
. ဈေးရောင်းချသူများတွင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) နှင့် မျက်နှာအကာ (face shield) တပ်ဆင်ခြင်းမရှိက ရောင်းချခွင့်မပြုရန်၊
. အများပြည်သူဆိုင်သောနေရာများတွင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ သွားလာမှုမရှိစေရန်၊
. အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားများတွင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ဆင်ခြင်း မပြုဘဲ စီးနင်းခွင့်မပြုရန်နှင့် စီးနင်းနေစဉ် လမ်းခရီတွင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) ကိုချွတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မေးသိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ဆက်လက်စီးနင်းခွင့် မပြုရန်၊
.ဘတ်စ်ကားမောင်းသူများ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (mask) နှင့် မျက်နှာအကာ (face shield) မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ရန်၊
. စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများ တိကျစွာလိုက်နာရေး ဆောင်ရွက်ရန် တို့ကို ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊
• COVID-19 လူနာတစ်ဦးချင်းအား ကုသမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနှင့် ကုသမှု အထောက်အကူပြု ပညာရှင်များသည် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်ရာ ပင်ပန်းနေကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ယခုဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်း ကြာမြင့်မည်အချိန်ကာလသည် ပြည်သူများ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုသည့် အချက်နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်နွှယ်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
• COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် COVID-19 ကို ယခုလက်ရှိ အခြေအနေအတိုင်းအတာအထိ ထိန်းချုပ်ထား နိုင်သည်ကို အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကိုသာ ဗဟိုသို့ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အကြောင်းကြားရန်လိုပါကြောင်း၊
Author: MOHS-Admin Last modified on Tuesday, 08 Dec 2020